Ngubani owasungula inyanga yenyanga?
Ngomhla ka-Julayi 20, 1969, imbali yenziwa xa abadlali bezulu behamba kwinqanaba lomlambo I-Eagle yaba ngabantu bokuqala ukuhlala kwenyanga. Kwiiyure ezithandathu emva koko, uluntu luthatha isinyathelo sokuqala senyanga.
Kodwa emva kweeminyaka ngaphambi kwelo xesha, abaphandi e- United States indawo ye-NASA bebejongele phambili kwaye bekhangele ukudala isithuthi esasiza kuba sebenzela umsebenzi wokunika iingcali ukuba zihlolisise izinto ezininzi ezithathwa ukuba ziza kuba zinkulu kwaye zinzima .
Izifundo zokuqala zesithuthi seenyanga zaziqhubekile ukususela ngowe-1950 nangomxholo we-1964 opapashwe kwi-Popular Science, uMlawuli we-NASA waseMarshall Space Flight Centre uWernher von Braun wanikezela iinkcukacha zokuqala malunga nokuba isithuthi esinokusebenza njani.
Kulo nqaku, u-von Braun wachaza ukuba "nangaphambi kokuba abakhandi bokuqala baqhube inyawo kwinyanga, isithuthi esincinane, esihamba ngokuzenzekelayo sisenokuziphonononga ngokukhawuleza kwisiza sokungena kwindawo yesiphathi saso esingenamntu" kwaye ukuba isithuthi " ekulawulwa kude kude nomqhubi weenqwelo zezihlalo emhlabeni, obona ukukhanya kwenyanga ekudlulileyo kwithempyuthele njengokungathi wayekhangela kwi-windshield. "
Mhlawumbi akunjalo ngokukodwa, oko kwakunjalo nangonyaka oososayensi kwiziko laseMarshall baqala umsebenzi ngomgaqo wokuqala kwisithuthi. I-MOLAB, emele iLebhu yeTrafti yeTrafti, yayiyindoda ebini, iitoni ezintathu, i-car-cabin imoto kunye neekhilomitha ezili-100.
Enye ingcamango eqwalaselwe ngethuba ngexesha lalinguSithili seScientific Surface Module (LSSM), eyaqala ukuba yesikhululo se-shelter-laboratory (SHELAB) kunye nesithuthi esincinci senyanga (LTV) esingaqhutyelwa okanye esilawulwa kude. Kwakhona babhekisela kwii-robotic ezingenakunqandwa ezikwazi ukulawulwa zivela eMhlabeni.
Kwakukho iqela lezinto ezibalulekileyo abaphandi abafanele bahlale bekhumbula engqondweni yokuyila i-rover enekhono. Enye yezona ndawo zibaluleke kakhulu kukukhethwa kwevili ngenxa yokuba kuncinci kakhulu kwaziwa malunga nenyanga. I-Marshall Space Flight Centre ye-Space Sciences Laboratory (i-SSL) yayinomsebenzi wokuqulunqa imimandla yendawo yenyanga kunye nesayithi yokuhlola esetyenziselwe ukuhlolisisa iimeko ezahlukeneyo zevili. Enye into ebalulekileyo yayisisisindo njengoko iinjineli zineenkxalabo ukuba izithuthi ezinzima ziza kwandisa kwiindleko zee-Apollo / Saturn. Kwakhona bafuna ukuqinisekisa ukuba i-rover yayikhuselekile kwaye inokwethenjelwa.
Ukuphuhlisa kunye nokuvavanya iiprototypes ezahlukahlukeneyo, iMarshall Centre yakha isimulator yomhlaba eyangqambela inyanga. Nangona kwakunzima ukuzama kunye neengxelo kuzo zonke iinguqu ezinokudibana nazo, abaphandi babesazi izinto ezithile. Ukungabikho kwemimoya, ukushisa okuphezulu kakhulu kunye kunye nokuba ngaphantsi kwama-degrees ama-250 amaFahrenheit kunye nobuthakathaka obuthathaka kakhulu kwakuthetha ukuba isithuthi senyanga sifanele sixhotyiswe ngokupheleleyo kunye neenkqubo eziphambili kunye nezixhobo ezinzima.
Ngowe-1969, u-von Braun wamemezela ukusekwa kweQela leMisebenzi eliLunar Roving eM Marshall.
Injongo yayikuza kweso sithuthi esenza kube lula ukuhlola inyanga ngeenyawo ngelixa uvale ezo zithuba ezinqabileyo kwaye zithwele izinto ezincinci. Ngaloo ndlela, oku kuya kuvumela uluhlu olukhulu lokunyuka kanye ngenyanga kwinyanga yokuba i-arhente ilungiselela ukuhanjelwa okuninzi okwakulindelwe i-Apollo 15, 16 no-17. Umenzi wendiza wanikezelwa isivumelwano sokunyamekela iphrojekthi ye-rover kunye nokuhambisa mveliso yokugqibela. Ngaloo ndlela ukuvavanywa kwakuza kwenziwa kwinkampani yenkampani eKent, eWashington, kunye nokuveliswa kwendawo e-Boeing eHuntsville.
Nantsi ingqungquthela yento eya kwiyilwe yokugqibela. Kwakuboniswe inkqubo yokuhamba (iivili, ukuqhubela i-traction drive, ukumiswa, ukulawula kunye nokulawula umqhubi) onokugijima kwiimithinteli ukuya kuma-intshi angama-12 aphezulu kunye ne-crints 28-diameter.
Amathaya ayenomzekelo ogqithisileyo owawubavimbela ukuba bangene kwihlabathi elithambileyo kwaye babexhaswa yimithombo ukuze banciphise ubuninzi bawo bunzima. Oku kunceda ukulinganisa inyumbala ebuthathaka. Ukongezelela, inkqubo yokukhusela i-thermal eyayiyeka ukufudumala yayibandakanywe ukukunceda ukukhusela izixhobo zayo ukusuka kwiqondo elidlulileyo kwenyanga.
Ukuhamba kwenyanga kunye neenjini ezihamba phambili zilawulwa ngokusebenzisa umlawuli wesandla esenziwe ngu-T ebekwe ngqo phambi kwezihlalo zombini. Kukho iphaneli yokulawula kwaye ubonise ngokutshintshwa kwamandla, ulawulo, amandla okuqhuba kunye nokuqhuba umbane. Ukutshintsha kwavumela abaqhubi ukuba bakhethe umthombo wabo wamandla kule mi sebenzi eyahlukeneyo. Ukunxibelelana, i-rover yafika ifakwe ikhamera yethelevishini , inkqubo yoonxibelelwano yomsakazo kunye ne-telemetry - yonke into engasetyenziselwa ukuthumela idatha nokubika ingxelo kumalungu eqela eMhlabeni.
Ngo-Matshi ka-1971, uBoing wahambisa umzekelo wokuqala wokubalekela kwi-NASA, kwiiveki ezimbini phambi kweshedyuli. Emva kokuba ihlolwe, isithuthi sathunyelwa kwisiKhungo samaZiko saseKennedy ukuze silungiselele ukuqaliswa kokumiselwa kwenyanga okujoliswe ngoJulayi. Kuzo zonke, iindlovu ezine zenyanga zakhiwa, enye enye ibe yintlanganiso ye-Apollo ngelixa yesine yayisetyenziselwa iinxalenye zokugcina. Ixabiso lilonke lixabiso leedola ezingama-38.
Ukusebenza kwe-rover yenyanga ngexesha le-Apollo 15 yayiyiyona nto ibangela ukuba uhambo lube yimpumelelo enkulu, nangona kwakungekho ngaphandle kwe-hiccups. Ngokomzekelo, uAstronaut uDave Scott wathola ngokukhawuleza ekuhambeni kokuqala ukuba indlela yokuhamba phambili ayisebenzanga kodwa ukuba isithuthi sisenokuqhutyelwa ngaphandle kwe-hitch sibonga ngenxa yokuhamba kwevili.
Kwimeko nayiphi na into, abasebenzi babekwazi ukugqibelela ingxaki baze bazalise iindwendwe zabo ezintathu ezicwangcisiweyo zokuqokelela iisampula zomhlaba baze bathathe iifoto.
Kuzo zonke, izazi zeehambo zazihamba ngeekhilomitha ezili-15 kwi-rover kwaye zifakela ngokuphindaphindiweyo ezine indawo enyangeni yenyanga njengalezo zangaphambili ze-Apollo 11, 12 ne-14 ezihlanganisiweyo. Iingqikithi, abadlali be-astronauts baye bahamba phambili kodwa bagcinwa kwibala elilinganiselwe ukuqinisekisa ukuba bahlala emkhatsini wokuhamba umlinganiselo wenyanga, nje ukuba i-rover yaqhekeka ngokungalindelekanga. Ijubane eliphezulu lali malunga neekhilomitha ezili-8 ngeyure kwaye isantya esiphezulu esibhaliweyo sasingama-11 eekhilomitha ngeyure.
2017-18 SAT Iindleko, iMirhumo kunye neMigodi
Indlela Yokubhala Ukubukwa Kwefilimu